SARAKI KWURU NA ENWEGHI MGBE O KPORO MELAYE ONYE OME-OCHI, SEN. ADAMU BU ONYE ASI
Home https://isimbido.tv/jack-casino-ohio/ https://isimbido.tv/gta-casino-cars/
SARAKI KWURU NA EWEGHI MGBE O KPORO MELAYE ONYE OME-OCHI, SEN. ADAMU BU ONYE ASI
Onye isi oche nke Senate Dokita Abubakar Bukola Saraki kwuru na Senator nọchite anya Nasarawa West, Abdullahi Adam, dịka ‘onye ụgha na-atụ egwu na nwoke na-enweghị ntụkwasị obi nke ga-eme ma ọ bụ kwuo ihe ọ bụla iji kwekọọ n’ọnọdụ ya n’oge ọ bụla.’ ….((melaye))>>>
Nke a bụ ọbụna dị ka ọ na-agọnahụ nkwupụta ndị a na-ekwu na Senọ Adam na ya (Saraki) nwere mgbe ọ na-akparịta ụka onwe ya na Sen. Adam, na-akpọ Sen. Dino Melaye dịka ‘ude’.
UMUAKA IRI ATO NA-ETO ETO NA EBUTE HIV N’OTU AWA
N’okwu onye ọkachamara pụrụ iche na mgbasa ozi na mgbasa ozi ya, Yusuph Olaniyonu, Saraki kwuru na Senator si Nasarawa State nọ na-akọcha ma na-agha ụgha banyere ya mana ọ ka leghaara ya anya maka nkwanye ùgwù maka afọ ndụ ya.
“Enwere m ụma eleghara ihe ndị omekome nke Senator Abdullahi Adam, karịsịa mgbasa ozi mgbasa ozi mgbe niile na mụ na Senate ebe ọ bụ na Commission Economic Crime (Financial Equity Commission) (EFCC) kpara faịlụ ya ebubo na ebubo ikpe rụrụ arụ ma gaa n’ihu ịkatọ nwa ya n’ụlọ ikpe .
“Ruo ugbu a, agbakasịwo m ịzaghachi n’ememe maka nkwanye ùgwù maka afọ ndụ ya. Otú ọ dị, o yiri ka o meela ka m mata ntozu okè m na nkwanye ùgwù maka ịdị mma.
“Ọ na-eche ụzọ kasịsị mma isi egwu egwu onwe ya ma na-agwa onwe ya na gọọmenti iji chekwaa akpụkpọ ahụ ya bụ ka a hụ ya na-alụ ọgụ megide Saraki, ọ bụrụgodị na nke ahụ ga-achọ ka ọ kọọ ụgha ụgha ma mee ihe ọjọọ na afọ ndụ ya.
NDI AGHA JIDERE NDI OHI ISE NA FELELE, GBUO OTU
“Otú ọ dị, enwere m mmetụta nkwupụta ọhụrụ ya na mkparịta ụka gị na akwụkwọ akụkọ mba kwesịrị ka m nwee mmeghachi omume.
“Nke mbụ, enweghị m ike ịkpọtụrụ onye ọrụ ibe m, Senator Dino Melaye dị ka onye nkuzi, ebe ọ maara na site n’ihe ndekọ ndị dị na ya, Senator Melaye enwebeghị ihe ọ bụla ma rụọ ọrụ kariri Senator Adam maka ọnụ ọgụgụ nke akwụkwọ ego akwadoro, ụtụ a kwụlitere na onyinye maka arụmụka n’ala.
“N’ụzọ doro anya, afọ asaa nke Adam enweghị ike iji tụnyere Senator Melaye afọ atọ. Senator Adam nweere onwe ya iji aka ya kwupụta okwu a.
“Ọzọkwa, ana m ekwu na Senator Adam bụ onye aghụghọ, onye ụgha na onye ụgha. Nanị ihe ọ na-ekwu bụ ihe na-adọrọ ya mma dịka ọ chọrọ, “ka o kwuru.
Saraki rịọrọ ndị Naijiria ka ha lelee onyinye ya n’ala ahụ tupu EFCC ebuso ya na nwa ya nwoke agha ma ha ga-ahụ na ọ bụ ụbọchị ikpeazụ, onye na-akwado onwe ya maka President Muhammadu Buhari.
Saraki kwusiri ike na onye omechiteanya anaghị akwado onye ọchịchị ugbu a, ma onye nyocha tupu ya na EFCC laghachiri.
“Ana m echeta kpọmkwem ihe ụfọdụ ọ gwara President na nlekọta ya mgbe anyị na-aga njem na njem anyị na Morocco na March afọ gara aga. Na oge kwesịrị ekwesị, anyị ga-enye nkọwa ndị ọzọ.
“Okwu Senator Abdullahi ekwesịghị ịdabere na ya. Ọ bụ onye aghụghọ na-ekwu ihe na-adabara ọnọdụ ọ hụrụ onwe ya. Ya mere, ugbu a ọ maara na Ụlọikpe ahụ nwere ndu ọjọọ mgbe afọ atọ gasịrị?
“Ọfọn, ebe ọ bụ na Senator Abdullahi Adam ghọrọ nkịta agha nke onye isi oche na Senate, na-eji asụsụ na-esiteghị na nwoke nke ọgbọ ya megide m na ndị ọrụ ibe ya bụ ndị ọ ghọtara na ọ dị mkpa ka ọ ghara ịkwado ndị ọrụ ya na ndị isi, m ghọtara na o kwesiri ka anyi jiri obi anyi.
“Ekwenyesiri m ike na ndị ọ na-eche na ọ na-arụ ọrụ maka ịmara na ọ bụ nwoke bara uru maka ugbu a,” ka o kwuru.
Tags: dinoIsimbidoISIMBIDO POSTisimbido postsisimbido tvISIMBIDOTVLATESTmelayenewnewspostSARAKISENATORupdate